China Steel Ilungu Generator lokucoca ulwelo mveliso kunye nabenzi | Honghua
Ilungu lensimbi leGumbi lokucoca iGenerator
Ilungu lensimbi leGumbi lokucoca iGenerator -Iprojekthi yaseAsuganj Bangladesh
Ilungu lentsimbi elinjalo ngumbhobho wokukhupha umbane wejen enkulu. Inkqubo yokucoca umoya eninzi enje ngezixhobo zolawulo lokungcoliseka komoya, inkqubo yokuphelisa umoya, Ilungu lensimbi linokuzibandakanya kwi-mveliso.
I-Honghua inamandla okuvelisa izixhobo zentsimbi eziyinkimbinkimbi. Iimveliso zibandakanya: izixhobo zombane, izixhobo zepetroleum, izixhobo zeekhemikhali, izixhobo zesamente zesamente kunye nezixhobo zemigodi.
Ukusukela ukuphela kuka-2008, inkampani yethu ivelise ngaphezulu kweeseti ezingama-240 zezixhobo zombane zeBraden Manufacturing LLC yaseMelika kunye neBraden yaseYurophu, abathengi abaquka uMbane Jikelele waseMelika (GE), i-Siemens yaseJamani kunye neAlstom yaseFrance. Umahluko phakathi kwezi zixhobo kunye nezakhiwo zentsimbi ngokubanzi zezi: (1) olu hlobo lwezixhobo luyinkimbinkimbi ngakumbi, kwaye uninzi lweewelds lunokwenziwa kuphela ngesandla, ngenxa yoko imfuno yabasebenzi, ngakumbi ukubanakho kweewelders, ingqongqo kakhulu; (2) uninzi lwamacandelo ludityanisiwe, ngoko ke imfuneko yobukhulu, ngakumbi imingxunya edityanisiweyo kunxibelelwano, ingqongqo. Imigangatho yemveliso yezixhobo ibandakanya i-AWS, ASME, EN njl.
Ngeli xesha, inkampani yethu ivelise iiseti ezininzi zepetroleum, izixhobo zeekhemikhali, izixhobo zesamente, izixhobo zemigodi yamalahle kunye nezinye izixhobo ezincedisayo kwiinkampani zasekhaya nezangaphandle.
Egqithileyo Ikholamu yecandelo lebhokisi
Okulandelayo: Isakhelo senkcitho
Ulwakhiwo Steel Mining Equipment
Ulwakhiwo lwensimbi yeQonga lezixhobo